जनतालाई दु:ख दिएर आफूले मात्र सुख भोग्ने भ्रष्ट नेताहरुलाई कुकुर नै लगाएर लखेट्न रविको अपिल ( हेर्नुस भिडियो ) – Your1click
मनपरी भाडा असुल्दै एम्बुलेन्स सेवा !
जनतालाई दु:ख दिएर आफूले मात्र सुख भोग्ने भ्रष्ट नेताहरुलाई कुकुर नै लगाएर लखेट्न रविको अपिल ( हेर्नुस भिडियो )
December 4, 2017 admin0Comments Ravi lamichhane
आगामी मंगलबारको सिधाकुरा युएईबाट प्रसारण हुने सम्भावना, टिम रबि युएईको भिषा पर्खेर बसिरहेको छ ।
सिटामोल जस्तो साधारण औषधि नपाएर १८ जनाको मृत्यु, देउवा सरकार बेखवर ।
जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो बिषयमा गम्भीर नहुने हो भने यो समस्या झन विकराल हुने सम्भावना छ, के कुरा संकेत गरेका हुन् रविले ?
चुनाव प्रचारका लागि घरदैलोमा पुगेका नेताहरुले गर्दा हिजो आज ट्राफिक जाम भएको छ । चुनावै जितीसके जसरी फुलमाला र अविरले पुरीएर नेताज्युहरु अघि अघि कार्यकर्ताको हुल पछि पछि भएपछि शहरका चोक चोक र गल्ली गल्लीमा बाटो जाम भएको छ । जसका कारण १० मिनेटमा गन्तव्य पुग्नुपर्ने मान्छे २घण्टाको जाममा फस्न बाध्य छन् ।
आज म आँफै नेता ज्युहरुको जुलुसका कारण २ पटक जाममा फसे । मैले त तपाईलाई मजाले सरापे । तपाई कारण म समयमा पुग्न सकिन । यति धेरै मान्छेलाई दुख दिएर के चुनाव लड्नु ? कतिको जरुरी व्यवसायिक मिटिङ छुट्छ ,तपाईका कारणले यति दुख पाएकाहरुले तपाईलाई भोट दिन्छन् जस्तो लाग्छ ? भोट त परको कुरा नेता ज्यु सराप्छन् त्यो पनि धारे हात लगाएर ।
ठिकै छ तपाई महान राजनीतिज्ञ,तपाई जिन्दावाद ,तपाईको पार्टी महान तपाईको पार्टी पनि जिन्दावाद र तपाईको चुनाव चिन्ह पनि जिन्दावाद ,तपाईका विचार,तपाई एजेण्डा,तपाईको घोषणा पत्र र तपाईको सम्रग उमेदवारी जिन्दावाद नै जिन्दावाद तर हामी समयमा स्कुल,कलेज जान पाउनु चाही मुर्दावाद ? हाम्रो फ्लाइट छुट्छ,हामी विरामी पर्दा समयमा अस्पताल पुग्नु पर्छ के जनताका यि सबै हक अधिकार मुर्दावाद ? कहिले राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति सवारी कहिले मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सवारी त्यसमाथि नेताका घरदैलोले ट्राफिक जाम के हो यो ?
सरकार यो देशका विशिष्टहरुलाई हेलीकप्टर किनीदेउ ताकी उहाँहरु आकाश मार्गबाट यात्रा गर्न सक्नुहोस । जनताको दैनिकी विग्रीयो,समय वरबाद भयो सडकमा धुवा र धुलो खेपेर बसेका ट्राफिक प्रहरीहरुलाई सास्ती भयो । भए भरका सारालाई दुख दिएर आँफुले मात्र सुख भोग्न चाहेको हो भने वेग्लै कुरा भो तर सर्वसाधारण जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो बिषयमा गम्भीर नहुने हो भने यो समस्या झन झन विकराल हुने सम्भावना छ ।
हेर्नुस आजको बेजोड भाग
अष्टमी गुरुङका विषयमा श्रम मन्त्रीलाई थाहा समेत छैन् । ज्वरोका कारण १८ जनाको मृत्यु, सरकार बेखवर !
← Judwaa2– Full Movie
शेखरको विरासतमाथि लालबाबुको चुनौती →
आँगनमा विकास गर्न असार पर्खने सिंहदरबारले दूरदराजको उन्नति कहिले गर्ने ?
झन्डा बिगार्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण
ताजा समाचार (102)